Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းမှ (၃၀) နှစ်မြောက်အစည်းအရုံး "ကျွန်ုပ်သည်ဇာတ်စင်ကြီးရသွားသည်။ "
“ ကျွန်ုပ်သည်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်လှမ်းသည်!” ရုပ်ရှင်သည်အိုတာရပ်ကွက်ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းမှ၎င်း၏တည်ထောင်ခြင်း၏နှစ် ၃၀ မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောမိနစ် ၉၀ ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ရပ်ကွက်ရှိနေထိုင်သူများစွာသည်အပိုအဖြစ်ပုံရသည်၊ အများစုမှာ Ota ရပ်ကွက်တွင်ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာသည် Daisuke Miki ဖြစ်သည်။ TAMA NEW WAVE ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် Grand Prix ကိုအနိုင်ရပြီးနှစ်စဉ်အွန်လိုင်းကြော်ငြာ ၁၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်သည်။
"စင်မြင့်ကိုခိုးတာ။ မင်းကမင်းသမီးမင်းကြီးပဲ။ "
မင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်သည့် croquette ဆိုင်တွင်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သူ Hana Niwano သည်တစ်နေ့တွင်သက်တမ်းမရှည်သောသံသယဖြစ်ဖွယ်အဘိုး Kusaburo ၏ချဉ်းကပ်မှုကိုခံရသည်။
သူ၏ကွယ်လွန်သူဇနီးနှင့်အတူပြဇာတ်ရုံဇာတ်စင်ကိုရိုက်ကူးရန်သူ၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုသော Kusaburo သည်သူသည်ရပ်ကွက်ရှိယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွင်သူတွေ့ခဲ့သည့်“ ၃၀ နှစ်မြောက်ပြဇာတ်ရုံပွဲတော်” ၏လက်ကမ်းစာစောင်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤအဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ထိုအကြောင်း။
ဇာတ်စင်၏ခေါင်းစဉ်မှာ "Miracle Man" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် "မမြင်ရသော"၊ "inaudible" နှင့် "inaudible" ၏ဟန်းဒီးကပ်အားကျော်လွှားခဲ့သောဟယ်လင် Keller ၏ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံ၍ ကျော်ကြားသောအလုပ်တစ်ခုနှင့်မစ္စတာဆူလီဗန် (Mr. Sullivan) တို့သည်သူမ၏အလင်းကိုပေးခဲ့သည်။
စာရင်းစစ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးခါစ Hana နှင့်အချိန်ပိုင်းလုပ်သား Himeko တို့သည်ဤထူးဆန်းသောကြုံတွေ့မှုကိုအလောင်းအစားရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်မင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်လူအိုကြီး၏အထူးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
Hana Niwano \_ t မင်းသမီးဖြစ်ဖို့အိပ်မက်မက်တဲ့မိန်းကလေး။သူဟာထူးချွန်သူပါ၊ ဒါပေမယ့်သူစိတ်လှုပ်ရှားသွားရင်နှာချေ။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Nagasaki စီရင်စုတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။မင်းသမီးအနေဖြင့်သူသည်တီဗွီ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ကြော်ငြာများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ ရုပ်ရှင်သုံးကားကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည်။အဓိကဖျော်ဖြေမှုများမှာ CX "Exciting TV Sukatto Japan"၊ "Kirin", "SONY", "Ginza Color" စသည်တို့ပါဝင်သည်။
Himeko Yukitani Hana ၏အချိန်ပိုင်းအလုပ်မှအကြီးတန်း။ငါနှစ်ပေါင်းများစွာမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပြီ။
Ota ရပ်ကွက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ထုတ်လုပ်မှု Jinrikisha မှပိုင်ဆိုင်သည့်မင်းသမီး။“ Instant Swamp” (၂၀၀၅)၊ “ လိပ်များသည်အံ့သြလောက်အောင်မြန်ဆန်သည်” (၂၀၀၅)၊ “ ပုံနှိပ်စာအုပ်တွင်စာရင်းမဖော်ပြထားသောအင်းဆက်များ” (၂၀၀၇)၊ “ Achilles and the Turtles” (၂၀၀၈) နှင့်“ Nekonin” တို့ပါဝင်သည်။ 2005) ။ ) ထိုအများစွာသောပိုပြီး။
Saburo Ota (အများအားဖြင့်လူသိများသည်)
အသက်တာအနေဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဂန္ထဝင်ရာကူဂူကိုအစားထိုးသောလခစားလုပ်သောရာကူဂိုသည်မျက်မှောက်ခေတ်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ကိုယ်စားလှယ်အလုပ်များ - ကလေးများပြန်လာခြင်း၊ “ My Man”၊ “ Tsurugidake”၊ တီဗွီ“ Sansu စုံထောက်သုည”၊ “ Naoki Hanzawa” စသည်ဖြင့်ရုပ်ရှင်။
Tamatsutsumi အမျိုးသမီးနှင့်ငွေမဆန်သောသံသယဖြစ်ဖွယ်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ။
Tachikawa စတိုင်တွင် rakugoka အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် Takeshi စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။သူသည်ပါရမီရှင်နှင့်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်သူသည် "Suicide Bus" ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူဖြစ်ပြီး "Shichinin no Tomura" ရုပ်ရှင်၏ဒါရိုက်တာနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်ဝတ္ထုတစ်ခုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။သူ့စာအုပ်က "Pavlov ရဲ့လူသား" ပါ။
ဒါရိုက်တာ Daisuke Miki
Movie Impact Co. , Ltd. မှကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာ“ Cyclops Tears”,“ Mine” နှင့်“ Yokogawa Suspense” စသည့်ရုပ်ရှင်ကားများကိုပြဇာတ်ရုံဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။သူသည်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများ၊ တီဗွီအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဒါရိုက်တာများကဲ့သို့သောအမျိုးအစားမဟုတ်သောပုံရိပ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
"ငါဇာတ်စင်ကြီးရပြီ!" ရုပ်ရှင်ကို YouTube တွင်ရနိုင်သည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများမှ YouTube ကိုရယူပါ။
YouTube "ငါစင်မြင့်ကြီးကိုရတယ်။ (4K version)" (၉၆ မိနစ်)
YouTube "ငါဇာတ်စင်ကြီးရတယ်။ (Trailer)"
"ငါဇာတ်စင်ကြီးရတယ်!" ရုပ်ရှင်၏အထူး site ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ !!